Natron, umthombo ovulekileyo emva kwesoftware yokuqamba isoftware | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga Isoda yokubhaka. Oku yi ukuqamba isoftware "efanayo" emva kweZiphumo isetyenziswe kwimisebenzi yasemva kwemveliso kwi iividiyo ezihleliweyo. Ukulungela wonke umntu, le yinkqubo evulelekileyo yokufumana onke amaqonga.
UNatron yinkqubo ye ushicilelo lwevidiyo kunye ukwakhiwa kweentloko Vula Umnikezi. Esi sicelo sikhululekile ukusebenza naso, yonke into enokwenziwa ngeNatron inomdla. Esi sisixhobo esikhethekileyo, esiza kujongano esilula, esenza ukuba igophe lokufunda libonakale kwinkqubo enjalo.
Ukuba ufuna isixhobo esifanelekileyo Qalisa okanye wenze iziphumo ezibonakalayo, ii-intros, wenze imisebenzi yokwenziwa kwemveliso yasemva kokuphuma, wenze iigrafiki, uqhagamshele ngaphandle komthungo izimvo ezibonakalayo kunye nokunye, le nkqubo iya kuba lukhetho olufanelekileyo. Ewe kunjalo, kolu hlobo lomsebenzi, isixhobo esifanelekileyo kwaye nayiphi na ingcali enokukhetha ndicinga ukuba iya kuba emva kweZiphumo. Inokwenza yonke le misebenzi ngokufanelekileyo. Ingxaki ngale sicelo kukuba ayikhululekile kwaye ukuze siyisebenzise kufuneka siyithenge okanye siyiphule, into engabonakali kakuhle kakhulu.
UNatron wenzelwe ukuba abe yimodyuli. Iiplagi ezisebenza nazo zihlala ziphuhliswa liqela elikhulayo labadwelisi benkqubo. Inguqulelo nganye entsha ekhutshwe yiprojekthi izinzile ngakumbi kwaye inekhathalogu ebanzi ebanzi yokusebenza kunye neziphumo kunangaphambili.
1 Iimpawu ngokubanzi Natron
2 Faka uNatron kwi-Ubuntu 64 bits
3 Khipha uNatron
Iimpawu ngokubanzi Natron
Su Ujongano lomsebenzisi linomdla. Ukulungiselela lula, ujongano lomzobo lomsebenzisi lunokwahlulwa kulo naliphi na inani lezikrini. Ixhasa ukuboniswa kweRetina kwiMacOSX. NgoNatron sinako yonga ixesha ngokugcina zonke iimbono ngokulandelelana okufanayo.
Libala ngokulinda ngexesha lokunikezelwa. Kule sicelo yonke into oyenzayo ivelisa ingxelo yexesha langempela. Isicelo sisinika ukudlala ngexesha lokwenyani. Nje ukuba isakhelo sinikezelwe, inokudlalwa emva kwangoko emva koko.
UNatron unokwenza iitshathi ezininzi ngaxeshanye ngelixa isebenzisa i-100% yamandla ekhompyuter e-CPU. Ukusebenza kwenethiwekhi kuye kwasetyenzwa kakuhle kakhulu eNatron.
Iimfuno zehardware zifikeleleka kakhulu. Yonke into ayifunayo umsebenzisi yiprosesa engama-86 okanye engama-64-bit x32. Ubuncinci i-3 GB ye-RAM kunye nekhadi lemizobo elixhasa i-OpenGL 1.5+ iya kufuneka.
Le nkqubo isinika indlela elula nesebenzayo yokujongana namagama aphambili kunye nomhleli wegophe ochanekileyo kakhulu. Siza kukwazi setha intetho kumagophe oopopayi ukwenza intshukumo elula nethembakeleyo yezinto. Siya kuba nakho ukubanakho hlela izikhumba zethu.
Los iindawo ezisetiweyo Baza kuba nakho ukungeniswa ngokulula / ukuthunyelwa ngaphandle ngokufunwa kuphela ukuba ifomathi yefayile yabo ibe yiXML.
UNatron wenze ukuba kufumaneke ngeyakhe IPython API ubukhulu becala ukusebenza kwayo. Isicelo kubandakanya itoliki engu-2.7 ezingasetyenziselwa ukwenza ngokwezifiso isicelo ngendlela esithanda ngayo. Inkqubo iya kusinika isixhobo somyalelo. Ngayo sinako run iifayile zeprojekthi kunye nezikripthi python.
Faka uNatron kwi-Ubuntu 64 bits
Ukufakela le nkqubo kufuneka nje khuphela eyakho iphepha lewebhu. Kuyo siya kufumana abafaki kuwo onke amaqonga, kwaye phakathi kwabo sinakho Khuphela ifayile ye i-installer ye-Ubuntu 64-bit.
Emva kokukhuphela ifayile, kuya kufuneka siyivule izip kwindawo esiyikhumbulayo. Ngaphakathi siya kufumana ifayile enye. Ukuba senza njalo cofa kabini kule fayile, ifestile yofakelo iya kuvulwa zenkqubo. Kuya kufuneka ulandele imiyalelo ebonakala kwiifestile zokugqiba ukufakwa kukaNatron ku-Ubuntu.
Kuya kufuneka ndibulele «juan»Amakhonkco owashiyileyo kumagqabantshintshi eli nqaku, ukusukela oko ububekile ngomhla wakho, awusasebenzi.
Ukususa le nkqubo kwinkqubo yethu yokusebenza, sinokuyenza ngendlela efanayo njengoko kwakuhlala kunjalo. Kufuneka sivule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sibhale kuyo:
Ukuba kukho umntu ofuna funda ngakumbi ngale projekthi okanye iimpawu zayo ngokubanzi ngakumbi kubunzulu, unokubonisana iwebhusayithi yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Natron, umthombo ovulekileyo emva kwesoftware yokuqamba isoftware
UJulia Escobio sitsho
Phendula uJulia Escobio
enkosi mhlobo undincede kakhulu ngoku ndiyakwazi ukuhlela iividiyo zam ngokukuko ngale nkqubo. Imibuliso evela eArgentina
Ikhonkco alisebenzi kodwa le iyasebenza:
kwaye iphepha leli:
Enkosi kakhulu ngesaziso sokuba amakhonkco awasasebenzi. Ndiye ndalihlaziya eli nqaku ngezi linki. Salu2.
molo ukuba ndifuna ukongeza umfanekiso kwividiyo, umzekelo: tshintsha intloko ubeke enye kwividiyo. Yeyiphi inkqubo oyicebisayo ngo-Ubuntu kunjalo. Enkosi.
I-OpenShot 2.4.0 iphucula uzinzo nangaphezulu